SMART ဖြစ်ရင် အောင်မြင်မယ်
The Khant| April 29, 2019 | Personal Development
အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ MotivSuccess ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တိုရဲ့ စာဖတ်ပုရိသတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ SMART analysis အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လူဦးရေဟာ တိုးပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။ လူဦးရေတိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ လူတွေ၊ အဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်း အလွန်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ အနေအထားမှာ အောင်မြင်တဲ့လူတွေရှိသလို၊ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျရှုံးနေတဲ့လူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ သူတို့က ဘာလို့အောင်မြင်ပြီး၊ တချို့လူတွေက ဘာ့ကြောင့် မအောင်မြင်ကြရတာလဲ?
တကယ်တော့ ပန်းတိုင်အတွက် ကြိုးပမ်းကြတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာမျိုး အလွန်ကိုနည်းပါးပါတယ်။ နည်းစနစ်တွေကို မသိတာမျိုးဖြစ်နိုင်သလို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ့်သူ မရှိတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။(တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာ MotivSuccess ကနေ အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Chat Box မှာ လာရောက် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။) ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးမှာကတော့ SMART ကိုအသုံးပြီး မိမိပန်းတိုင်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လို စီစဉ်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
– Time – bound(အချိန် ကန့်သတ်နိုင်တဲ့) အစရှိတဲ့ စာလုံးတွေကိုပေါင်းစည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီမှာ ခိုင်မာတဲ့ အဓိပါယ်ရှိသလို၊ အားလုံးကိုပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း တော်တော်ကို ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် အောင်မြင်မှုတွေဟာ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ သင့်ကို စောင့်ကြိုနေမှာပါ။ SMART ကို အောက်မှာ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုခုကို စီစဉ်၊ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ တိကျပြတ်သားတဲ့ ပန်းတိုင်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ တိကျ၊ ပြတ်သားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ဖို့အတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သင့်ကိုသင် မေးနိုင်ပါတယ်။
– သင် ဘယ်အရာကိုလိုချင်တာလဲ? ဘာကြောင့်လဲ?
– ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ? ဘယ်နည်းလမ်းတွေကို သုံးရမှာလဲ?
– ဒါကဘာကြောင့် သင့်အတွက် အရေးပါတာလဲ?
– ဒါကို သင်တစ်ယောက်တည်း လုပ်နိုင်မှာလား? ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ဖို့လိုသေးလဲ?
– ဒါကို ဘယ်နေရာမှာ ပြုလုပ်မှာလဲ? ဘယ်လို ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုရမှာလဲ?
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ထိုလုပ်ငန်းရဲ့ ရလဒ်ကို တိုင်းတာလို့ရ၊ မရဆိုတာလည်း တော်တော်လေးကို အရေးပါပါတယ်။ တိုင်းတာနိုင်မှာသာ ဒီလုပ်ငန်းဟာ ဘယ်အခြေအနေအထိ ပြီးစီးနေပြီ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြီးစီးဖို့ လူအင်အား၊ စက်အင်အား ဘယ်လောက်သုံးလိုက်ရင် ဘယ်အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း ပြီးမယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းတိုင်ချမှတ်တဲ့အချိန်တည်းက တိုင်းတာလို့မရဘူးဆိုရင် ဒီလုပ်ငန်း ပြီးစီး၊ အောင်မြင်ဖို့ ရာခိုင်းနှုန်း အလွန်နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ပြောစရာတောင်မလိုလောက်ပါဘူး။ ကိုယ့် ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာရောက်ဖို့အတွက် အစကတည်းက အောင်မြင်နိုင်တဲ့ ပန်းတိုင်ချမှတ်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ Achievable ကိုထည့်ထားခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ တစ်ခါတစ်လေ လူအများစုဟာ မိမိမှားနေတာကို သိရက်နဲ့ ဆက်မှားနေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို လေ့လာပြီး သင့်ပန်းတိုင် အောင်မြင်နိုင်သလားဆိုတာကို စဉ်းစား၊ ချင့်ချိန်နိုင်ပါတယ်။
– သင့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို တိုင်းတာလို့ရတယ်
– ဒါကိုလုပ်ပြီး တခြားသူတွေ အောင်မြင်နေတယ်
– လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ သင့်မှာ အလုံအလောက်ရှိတယ်
– သင့်ကို လိုအပ်တာအားလုံးထောက်ပံ့ပေးမယ့်သူ (သို့) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု ရှိနေတယ်
မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို ချမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်အလုပ်မှာ သံသယစိတ်တွေ ရှိနေနိုင်သလို ယုံကြည်မှုလည်း လျော့နည်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်အလုပ်မှာ အာရုံစိုက်မှုလည်း လျော့လာပြီး အလုပ်ကိုပါ ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ လက်တွေ့ကျဖို့ များစွာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်း နားလည်၊ သဘောပေါက်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စီစဉ်မှုဟာ လက်တွေ့ကျနိုင်မလားဆိုတာကို အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို လေ့လာပြီး စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
– ဒီပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်ဖို့ တကယ်ရော ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား?
– ဒါကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူပြီး ဆောင်ရွက်မှာလဲ?
– လုပ်မယ့် လူတွေမှာရော လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ရှိရဲ့လား?
– လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးကို ဘယ်က ရမှာလဲ?
– ဘယ်သူက ဘယ်တာဝန်တွေကို ယူမှာလဲ?
Time – bound(အချိန်ကန့်သတ်နိုင်တဲ့)
မိမိပန်းတိုင်အတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲတဲ့အခါ အချိန်ကန့်သတ်ခြင်းဟာလည်း မရှိမဖြစ်ပါ။ အချိန်ကန့်သတ်ထားခြင်းဟာ လုပ်ငန်းရဲ့ တိုင်းတာမှုကိုလည်း ကူညီပေးနိင်ပါတယ်။ ဘယ်တာဝန်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးအောင်လုပ်ရမယ် ဆိုတာကိုသိမှသာ အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ကျွန်တော် ဒီဆောင်းပါးကို ည ၈ နာရီတိတိ Facebook page မှာတင်မယ်လို့ ရေတို ပန်းတိုင် တစ်ခုချမှတ်ထားတယ်။ ဒါကို အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးစီးချင်လို့ မနက်ကတည်းက ဒီဆောင်းပါးကိုစရေးတယ်။ PR အဖွဲ့ကို poster လုပ်ဖို့အတွက် အကြောင်းကြားတယ်။ တခြားပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်တယ်။ ဒီလို အစီအစဉ်တကျ ပြင်ဆင်ခဲ့လို့ပဲ အခု ည ၈ နာရီတိတိမှာ ဆောင်းပါးကို Facebook ပေါ်မှာတင်နိုင်တာပါ။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရည်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်ကန့်သတ်ခြင်းဟာလည်း အခရာကျတယ်ဆိုတာ သိသာနေပါတယ်။
အပ်ါမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ SMART ကိုအသုံးပြီး မိမိပန်းတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လို စီစဉ်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးရင် သင် နောက်ထပ်ဖတ်သင့်တာကတော့ ‘သင့်ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ P (၄) လုံး’ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ (တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာ MotivSuccess ကနေ အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Chat Box မှာ လာရောက် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။) ဒီဆောင်းပါးဟာ သင့်အတွက် အလွန် အသုံးဝင်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို သင့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်းပါးတွေကို အပတ်စဉ် ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Facebook Page ကို Like & See First လုပ်ထားဖို့ သင့်ကို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
SMART ဖွဈရငျ အောငျမွငျမယျ
အားလုံး မင်ျဂလာပါ။ MotivSuccess ကနကွေိုဆိုပါတယျ။ ဒီနေ့ ကြှနျတျောတိုရဲ့ စာဖတျပုရိသတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြတာကတော့ SMART analysis အကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ လူဦးရဟော တိုးပှားလကျြရှိနပေါတယျ။ လူဦးရတေိုးပှားလာတာနဲ့အမြှ လူတှေ၊ အဖှဲ့စညျးတှကွေားမှာ ပွိုငျဆိုငျမှုကလညျး အလှနျပွငျးထနျလာပါတယျ။ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျတဲ့ အနအေထားမှာ အောငျမွငျတဲ့လူတှရှေိသလို၊ ကွိမျဖနျမြားစှာ ကရြှုံးနတေဲ့လူတှလေညျး ဒုနဲ့ဒေးပါ။ သူတို့က ဘာလို့အောငျမွငျပွီး၊ တခြို့လူတှကေ ဘာ့ကွောငျ့ မအောငျမွငျကွရတာလဲ?
တကယျတော့ ပနျးတိုငျအတှကျ ကွိုးပမျးကွတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့ အမြားစုဟာ စနဈတကြ စီစဉျဆောငျရှကျတာမြိုး အလှနျကိုနညျးပါးပါတယျ။ နညျးစနဈတှကေို မသိတာမြိုးဖွဈနိုငျသလို တိုငျပငျဆှေးနှေးမယျ့သူ မရှိတာလဲဖွဈနိုငျပါတယျ။(တနင်ျဂနှနေတေို့ငျးမှာ MotivSuccess ကနေ အခမဲ့ဆှေးနှေးပေးတဲ့ အစီအစဉျရှိပါတယျ။ အသေးစိတျကို Chat Box မှာ လာရောကျ စုံစမျးနိုငျပါတယျ။) ဒါ့ကွောငျ့ ဒီနေ့ ကြှနျတျောတို့ဖျောပွပေးမှာကတော့ SMART ကိုအသုံးပွီး မိမိပနျးတိုငျအတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဘယျလို စီစဉျမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးပဲဖွဈပါတယျ။
– Time – bound(အခြိနျ ကနျ့သတျနိုငျတဲ့) အစရှိတဲ့ စာလုံးတှကေိုပေါငျးစညျးထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
စာလုံးတဈလုံးခငျြးစီမှာ ခိုငျမာတဲ့ အဓိပါယျရှိသလို၊ အားလုံးကိုပေါငျးစညျးလိုကျတဲ့အခါမှာလညျး တျောတျောကို ထိရောကျမှုရှိပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးအတိုငျးသာ ဆောငျရှကျမယျဆိုရငျ သငျ့အတှကျ အောငျမွငျမှုတှဟော မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတျမှာ သငျ့ကို စောငျ့ကွိုနမှောပါ။ SMART ကို အောကျမှာ အသေးစိတျ ရှငျးပွထားပါတယျ။
ကိစ်စတဈခုခုကို စီစဉျ၊ ဆောငျရှကျတဲ့အခါ တိကပြွတျသားတဲ့ ပနျးတိုငျရှိဖို့လိုပါတယျ။ တိကြ၊ ပွတျသားတဲ့ ပနျးတိုငျကို ခမြှတျဖို့အတှကျ အောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ မေးခှနျးတှကေို သငျ့ကိုသငျ မေးနိုငျပါတယျ။
– သငျ ဘယျအရာကိုလိုခငျြတာလဲ? ဘာကွောငျ့လဲ?
– ဒါကို ဘယျလိုလုပျရမှာလဲ? ဘယျနညျးလမျးတှကေို သုံးရမှာလဲ?
– ဒါကဘာကွောငျ့ သငျ့အတှကျ အရေးပါတာလဲ?
– ဒါကို သငျတဈယောကျတညျး လုပျနိုငျမှာလား? ဘယျသူတှေ ပါဝငျဖို့လိုသေးလဲ?
– ဒါကို ဘယျနရောမှာ ပွုလုပျမှာလဲ? ဘယျလို ပစ်စညျးတှကေို အသုံးပွုရမှာလဲ?
လုပျငနျးတဈခုကို လုပျဆောငျတဲ့အခါ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ထိုလုပျငနျးရဲ့ ရလဒျကို တိုငျးတာလို့ရ၊ မရဆိုတာလညျး တျောတျောလေးကို အရေးပါပါတယျ။ တိုငျးတာနိုငျမှာသာ ဒီလုပျငနျးဟာ ဘယျအခွအေနအေထိ ပွီးစီးနပွေီ၊ လုပျငနျးတဈခုလုံးပွီးစီးဖို့ လူအငျအား၊ စကျအငျအား ဘယျလောကျသုံးလိုကျရငျ ဘယျအခြိနျအတိုငျးအတာအတှငျး ပွီးမယျဆိုတာကို ခနျ့မှနျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ပနျးတိုငျခမြှတျတဲ့အခြိနျတညျးက တိုငျးတာလို့မရဘူးဆိုရငျ ဒီလုပျငနျး ပွီးစီး၊ အောငျမွငျဖို့ ရာခိုငျးနှုနျး အလှနျနညျးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ပွောစရာတောငျမလိုလောကျပါဘူး။ ကိုယျ့ ပနျးတိုငျကို အောငျမွငျစှာရောကျဖို့အတှကျ အစကတညျးက အောငျမွငျနိုငျတဲ့ ပနျးတိုငျခမြှတျထားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ Achievable ကိုထညျ့ထားခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျးကတော့ တဈခါတဈလေ လူအမြားစုဟာ မိမိမှားနတောကို သိရကျနဲ့ ဆကျမှားနကွေလို့ပဲဖွဈပါတယျ။ အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ အခကျြတှကေို လလေ့ာပွီး သငျ့ပနျးတိုငျ အောငျမွငျနိုငျသလားဆိုတာကို စဉျးစား၊ ခငျြ့ခြိနျနိုငျပါတယျ။
– သငျ့ရဲ့ ပနျးတိုငျကို တိုငျးတာလို့ရတယျ
– ဒါကိုလုပျပွီး တခွားသူတှေ အောငျမွငျနတေယျ
– လိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးတှေ သငျ့မှာ အလုံအလောကျရှိတယျ
– သငျ့ကို လိုအပျတာအားလုံးထောကျပံ့ပေးမယျ့သူ (သို့) အဖှဲ့အစညျး တဈခုခု ရှိနတေယျ
မအောငျမွငျနိုငျတဲ့ ပနျးတိုငျတှကေို ခမြှတျခဲ့မယျဆိုရငျ သငျ့အလုပျမှာ သံသယစိတျတှေ ရှိနနေိုငျသလို ယုံကွညျမှုလညျး လြော့နညျးလာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈလာခဲ့ရငျ သငျ့အလုပျမှာ အာရုံစိုကျမှုလညျး လြော့လာပွီး အလုပျကိုပါ ရပျတနျ့သှားစနေိုငျပါတယျ။
ကိစ်စတဈခုခုကို ဆောငျရှကျတဲ့အခါ လကျတှကေ့ဖြို့ မြားစှာ အရေးကွီးတယျဆိုတာကိုတော့ လူတိုငျး နားလညျ၊ သဘောပေါကျမယျလို့ ကြှနျတျော ယုံကွညျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ စီစဉျမှုဟာ လကျတှကေ့နြိုငျမလားဆိုတာကို အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ အခကျြတှကေို လလေ့ာပွီး စဉျးစားနိုငျပါတယျ။
– ဒီပနျးတိုငျကို အောငျမွငျဖို့ တကယျရော ဖွဈနိုငျရဲ့လား?
– ဒါကို ဘယျသူက တာဝနျယူပွီး ဆောငျရှကျမှာလဲ?
– လုပျမယျ့ လူတှမှောရော လိုအပျတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှေ ရှိရဲ့လား?
– လိုအပျတဲ့ ငှကွေေးကို ဘယျက ရမှာလဲ?
– ဘယျသူက ဘယျတာဝနျတှကေို ယူမှာလဲ?
Time – bound(အခြိနျကနျ့သတျနိုငျတဲ့)
မိမိပနျးတိုငျအတှကျ အစီအစဉျရေးဆှဲတဲ့အခါ အခြိနျကနျ့သတျခွငျးဟာလညျး မရှိမဖွဈပါ။ အခြိနျကနျ့သတျထားခွငျးဟာ လုပျငနျးရဲ့ တိုငျးတာမှုကိုလညျး ကူညီပေးနိငျပါတယျ။ ဘယျတာဝနျကို ဘယျအခြိနျမှာ ပွီးအောငျလုပျရမယျ ဆိုတာကိုသိမှသာ အဲ့ဒီအခြိနျမတိုငျခငျ ကွိုတငျလုပျဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ – ကြှနျတျော ဒီဆောငျးပါးကို ည ၈ နာရီတိတိ Facebook page မှာတငျမယျလို့ ရတေို ပနျးတိုငျ တဈခုခမြှတျထားတယျ။ ဒါကို အောငျအောငျမွငျမွငျပွီးစီးခငျြလို့ မနကျကတညျးက ဒီဆောငျးပါးကိုစရေးတယျ။ PR အဖှဲ့ကို poster လုပျဖို့အတှကျ အကွောငျးကွားတယျ။ တခွားပွငျဆငျစရာရှိတာတှကေိုပွငျဆငျတယျ။ ဒီလို အစီအစဉျတကြ ပွငျဆငျခဲ့လို့ပဲ အခု ည ၈ နာရီတိတိမှာ ဆောငျးပါးကို Facebook ပျေါမှာတငျနိုငျတာပါ။ ဒါကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ရညျမှနျးခကျြ၊ ပနျးတိုငျတဈခုကို အောငျအောငျမွငျမွငျ ပွီးစီးအောငျ ဆောငျရှကျဖို့ အခြိနျကနျ့သတျခွငျးဟာလညျး အခရာကတြယျဆိုတာ သိသာနပေါတယျ။
အပျါမှာ ဖျောပွထားတာကတော့ SMART ကိုအသုံးပွီး မိမိပနျးတိုငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဘယျလို စီစဉျမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးကို ဖတျပွီးရငျ သငျ နောကျထပျဖတျသငျ့တာကတော့ ‘သငျ့ဘဝအတှကျ အရေးပါတဲ့ P (၄) လုံး’ အကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။ (တနင်ျဂနှနေတေို့ငျးမှာ MotivSuccess ကနေ အခမဲ့ဆှေးနှေးပေးတဲ့ အစီအစဉျရှိပါတယျ။ အသေးစိတျကို Chat Box မှာ လာရောကျ စုံစမျးနိုငျပါတယျ။) ဒီဆောငျးပါးဟာ သငျ့အတှကျ အလှနျ အသုံးဝငျမယျလို့ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးကို သငျ့သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး မြှဝနေိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဆောငျးပါးတှကေို အပတျစဉျ ဖတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့ Facebook Page ကို Like & See First လုပျထားဖို့ သငျ့ကို တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။